Global Voices teny Malagasy » Miatrika fanadihadiana ilay mpanoratra Maleziana rehefa avy namoaka boky momba ny fanapaha-keviny tsy hitafy hijab · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Novambra 2019 6:03 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fivavahana, Haisoratra, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Fonon'ny bokin'i Maryam Lee, Unveiling Choice (Safidy tsy Hisarom-boaly).
Nohadihadian'ny  manampahefana ara-pivavahana ilay mpanoratra Maleziana Maryam Lee taorian'ny famoahana boky mitantara ny fanapahan-keviny hitsahatra tsy hitafy hijab  na ilay sarondoha entin'ny vehivavy Miozolomana marobe.
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Maryam fa nahazo fampiantsoana izy tamin'ny volana Oktobra 2019, fampiantsoana avy amin'ny Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) nangataka azy mba hanaiky ny fanadihadiana noho ny mety ho fanitsakitsahana ny Andininy faha-10 (a) momba ny Lalànan'ny Heloka Bevava Syariah (Selangor), izay manameloka ireo “olona rehetra, amin'ny alàlan'ny teny, mety ho re na vakiana na amin'ny alàlan'ny sary, marika na endrika fanehoana hafa izay hita na mety ho hita na amin'ny fomba hafa: (a) manompa na mety hanohintohina ny fivavahana Islamo. “
Raha voampanga i Maryamary hita fa meloka dia mety handoa onitra mitentina RM5.000.00 (1.200 dolara Amerikana) na telo taona an-tranomaizina na izy roa.
Mino i Maryam fa misy hifandraisany amin'ny bokiny , Unveiling Choice (Safidy tsy Hisarom-boaly), izay navoaka tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary manazava ny hevitry ny ‘dehijabbing’ ny fampiantsoana azy. Nanjary niteraka adihevitra ny famoahana ity boky ity rehefa nanome baiko  tamin'ny fanaovana fanadihadiana momba ny hetsika ny Departemantan'ny Praiminisitra misahana ny Raharaham-pivavahana.
Manana vahoaka maro Miozolomana i Malezia ary fantatra amin'ny fampiroboroboana ny fomba fijery mahay mandanjalanja momba ny finoana Islamo tohanan'ny lalàna tarihin'ny fitsipiky ny firindrana ara-pirazanana sy ara-pinoana. Saingy tato anatin'ny taona vitsy dia nisy ireo hiringiriny  sasany izay nanery ny fampiharana hentitra ny fampianarana ny Islamo amin'ny fitantanana. Hita taratra  tamin'ny didy navoakan'ny Fitsarana Ambony tamin'ny volana Aogositra 2019 izay nankatoa ny fahefan'ny Fitsarana Shariah hamoaka ny fatwa  hanoherana ny Sisters in Islam, vondrom-behivavy manohana ny miralenta ihany koa ny famerana ny fanehoan-kevitra ara-pinoana .
Nanao antso  ho firaisankina i Maryam nandritra ny nanatrehany fanadihadiana :
Amin'ny toe-javatra tahaka izao, zava-dehibe ho antsika ny mampahatsiahy ny governemanta fa tsy heloka ny fahalalahana maneho hevitra ary tsy fanevatevana ny Islamo ny fahalalahana ara-pinoana, ary ilaina amin'ny fanandratana ny zon'olombelona ho an'ny rehetra ny fiarovana ireo fahalalahana ireo.
Hetsika fanaovana sonia boky ho an'ny Unveiling Choice. Loharano: Facebook
Vondrom-behivavy, mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanakanto ary manam-pahaizana isankarazany no namaly ny antso tamin'ny alàlan'ny famoahana fanambarana firaisankina.
Nilaza  ny Vondrona Miara-Miasa ho an'ny Miralenta, fiaraha-mientana ao amin'ny fikambanana miisa 13 mpiaro ny zon'ny vehivavy ao Malezia fa mampiroborobo ny fampandrosoana ny vehivavy ny bokin'i Maryam:
Tsy mandrisika na manakivy ny mpamaky haneho ohatra ny zavatra nataony ny boky fa maneho ny fitsipika momba ny fanapahan-kevitra avy amin'ny zavatra niainan'ny olona iray sy ny fomba fijeriny raha ny marina.
Zava-dehibe ny tantara izay maneho taratra ny zava-misy isankarazany iainan'ny vehivavy satria izany dia mandray anjara amin'ny fahasamihafan'ny traikefa sy ny fifanakalozan-kevitra manodidina ny fomba fiantraikan'ny rafitra sy ny tsindry ara-tsosialy eo amin'ny vehivavy.
Nanamarika  ny Hetsika Maleziana ho an'ny Rariny sy ny Firaisankina fa ny JAIS no manevateva ny Islamo:
Maneho ny finoana Islamo ho toy ny ‘hery’ izy io fa tsy iray amin'ny safidy. Tsy fivavahana ho an'ny hery sady tsy fivavahana ho an'ny fampiharana ny finoana Islamo. Fivavahana mahay manavaka, ary mamela ny tsy fitovian'ny fisainana ny finoana Islamo – izay no mahatonga azy ho fivavahana lehibe. Manambany sy manevateva ny tena fototry ny Islamo ity hetsika nataon'i JAIS ity.
Niaro  ny zon'i Maryam amin'ny fahafahana maneho hevitra malalaka ny New Naratif, tranonkalam-baovao tsy miankina mitantara momba an'i Azia Atsimo Atsinanana:
Amin'ny maha-hetsika mijoro ho an'ny demaokrasia, ho an'ny fahalalahana maneho hevitra sy ho an'ny fahalalahana famotopotorana dia mino ny New Naratif fa ilaina ny manana toerana ahafahana mifanakalo hevitra manan-danja na dia mety ho saropady sy mampiady hevitra aza izany.
Safidy tena manokana ny safidy hitafy na tsia ny hijab, ary zava-dehibe ny hananan'ny olona fahafahana mitantara ny tantarany, mizara ny zavatra niainany ary hanolo tena amin'ny resaka azo itokisana, na inona na inona fanapahan-keviny farany.
Several civil society leaders in the region also signed a statement expressing  concern about the allegations against Maryam:
Mpitarika ny fiarahamonim-pirenena marobe ao amin'ny faritra ihany koa no nanao sonia fanambarana iray milaza  ny ahiahiny momba ny fiampangana an'i Maryam:
Heverinay ho fikasana hitsabaka ny safidin'ny vehivavy sy ny fizakan-tenany ara-batana izany ary indrindra indrindra ny zon'izy ireo iraisam-pirenena izay miantoka ny fanehoan-kevitra manokana. Miatrika fanamby maro ny vehivavy ao anatin'ny fiaraha-monina izay hiharan'ny famerana hatrany ary tsy manana fahafahana firy hanapa-kevitra ho an'ny tenany.
Ahitana ny zo haneho ny fomba fijerintsika manokana sy ny zo amin'ny fanaovana safidy momba ny vatantsika ny zon'ny fanehoan-kevitra malalaka sy ny fahalalahana ara-pivavahana ka ao anatin'izany ny fanapahan-kevitra hitafy hijab na tsia.
Ary farany, mampiseho ny toe-javatra hiainan'i Maryam ity sariitatra ity:
Amin'ny maha reny ahy, tsy mampandry saina ahy ny mieritreritra fa lasibatra sy voampanga tsy ara-drariny ilay mpanoratra miozolomana Maryam Lee, ankehitriny noho ny fihetseham-po manohitra ny Islamo fotsiny tamin'ny fanoratana sy fizarana momba ny safidiny manokana tsy hitafy malalaka ny hijab. Tsy midika hoe manohitra ny Islamo ny fahafahana tsy hitafy hijab! Raha tsy safidy ny Hiijab dia famoretana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/19/144779/
 nanome baiko: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/18/malaysia-islamic-authorities-investigate-women-activists-who-discussed-their-dehijabbing
 Hita taratra: https://www.icj.org/malaysia-high-court-ruling-on-sisters-in-islam-threatens-rights-to-freedom-of-expression-and-of-religion-or-belief/
 Nanao antso: https://maryamlee.com/jais-investigation-eng/